software တွေကို uninstall ပြန်လုပ်လိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင် ...Uninstaller Software Collection ~ ITmanHOME
19:39 နည်းပညာ No comments
software တွေကို uninstall ပြန်လုပ်လိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင် ...Uninstaller Software Collection
Your Uninstaller! 7.4.2012.05 Datecode 28.04.2012 Full Serial
အခု software လေးကိုလူတိုင်းသိကြမှပါ။အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ်။
install လုပ်ထားသော် software တွေကို uninstall ပြန်လုပ်လို
မရခဲ့ဘူးဆိုရင် အခု software လေးနဲဖြုတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်။
လိုအပ်ပါကအောက်မှ download လုပ်လိုက်ပါ။
Perfect Uninstaller 6.3.3.9 Datecode 30.07.2012 Full
software တွေကို Uninstall လုပ်လိုမရတဲ့သူတွေအတွက် အခု software သုံးပြီး Uninstall
လုပ်လိုရပါတယ်။လိုအပ်သူများ download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
install လုပ်ထားတဲ့ software တွေကို Uninstall လုပ်လိုမရတဲ့သူတွေအတွက်
အခု software ကို သုံးပြီး Uninstall လုပ်လိုရပါတယ်။
ဒါလေးနဲမှပျက်တော့တယ် Your Uninstaller! 7.4.2012.05
တစ်ချို့ software တွေကို install လုပ်ပြီးပြန်ပြီးဖျက်တော့မယ်ဆိုရင်
uninstall ပြန်လုပ်လိုမရလိုစိတ်ရှုပ်ကြရမှပါ။အခု software လေးနဲဖျက်မယ်ဆိုရင်
install လုပ်ထားတဲ့ software မှန်သမျှ uninstall ပြန်လုပ်လိုရမှပါ
အသုံးလိုတယ်ဆိုရင်အောက်မှ download ဆွဲလိုက်ပါ။